Author Topic: RIP Manu Brajaki - मनु ब्राजाकीलाई श्रद्धान्जली (Read 5381 times)
« Reply #10 on: February 04, 2018, 01:04:59 AM »
ऐना हेरी कराउन थाले मान्छे
आफूसँगै डराउन थाले मान्छे
मसानमा बसे बरू ढुक्क होला
घरबाटै हराउन थाले मान्छे
हाँस्दाखेरि रगतमा भिज्नुभन्दा
आँसु मनपराउन थाले मान्छे
चराएन पशुले त पशुलाई
अब मान्छे चराउन थाले मान्छे
केही गर्न बाँकी कहाँ रहेको छ ?
यस्तो पनि गराउन थाले मान्छे !
« Reply #11 on: February 04, 2018, 01:40:35 AM »
थाहा भयो छिमेकीको गुन कस्तो हुन्छ !
थाहा भयो चामलसँग घुन कस्तो हुन्छ !
आफ्नै मित्रसँग पनि लड्नुपरेको छ
थाहा भयो खा’को तिम्रो नुन कस्तो हुन्छ !
तिमीलाई जतिसुकै राम्री भने पनि
थाहा भयो द्वितीयाको जून कस्तो हुन्छ !
कानभरि, हातभरि, गलाभरि रै’छ
थाहा भयो बजारको सुन कस्तो हुन्छ !
मुटुबाट निस्किएर आँखाबाट झर्‍यो
थाहा भयो आँसु अनि खुन कस्तो हुन्छ !
राजा हिरो, नेता हिरो, जनता पनि हिरो
थाहा भयो ‘मनु’ हिरो कुन कस्तो हुन्छ !
« Reply #12 on: February 12, 2018, 11:18:46 PM »
माघ २७, २०७४ सुविद गुरागाई
काठमाडौँ — कस्तो हुनेछ तपाईंको मृत्यु ? केही सोच्नुभएको छ यस विषयमा ?’प्रश्न सुनेर उनले मेरो आँखामा गडेर हेरे । उमेर बढ्दै जाँदा कसै–कसैलाई आफ्नो मृत्युको पूर्वाभास हुन्छ । म जान्न चाहन्थेँ, उनका मनमा पनि त्यस्तो कुनै ठाँटो बसेको छ कि ?
मैले प्रश्न सोध्नुको कारणथियो । त्यसअघि उनले मसँग भनेका थिए, ‘अहिले म शारीरिक रूपमा थलिएको छु । पहिलेजस्तो लेख्न सक्तिनँ । शारीरिक अवस्थाले गर्दा लेखन क्षेत्रबाट मैले सन्न्यास लिएजस्तै छ । एक प्रकारले म त मरिसक्या छु । साहित्यिक क्षेत्रका लागि म मृत भइसकेँ । यो जुन अहिले बाँच्या छु भन्ने हो, यो त एउटा व्यर्थको ढाडस मात्र हो । आफ्नो परिवारका लागि यो मान्छे हिँड्दै–डुल्दै छ भन्ने मात्र हो ।’
हामीले मनु ब्राजाकी नामले चिन्दै आएको शरीरलाई आर्यघाटमा खरानी बनाउनु एक वर्षअघि मेरा दुईवटा एकै खाले प्रश्नमा उनले भने—
‘मेरो सम्पूर्ण जीवन घटियास्तरको नाटकजस्तो भए पनि मेरो मृत्यु मनु ब्राजाकीले लेखेका कथाजस्तै यथार्थवादी भइदिओस् † र, कुनै प्रकारको पाखण्डपूर्ण धार्मिक कर्मकाण्ड नगरी चेतमान सिंहको लास डढाएर खरानी पारियोस् !’
यथार्थमा त्यस्तै भयो, जे उनले चाहेका थिए । सम्भवत: परिदृश्यमा उनका लागि अपेक्षित एकपछि अर्को घटना हुँदै गर्दा उनको
आत्माले सन्तोष मानेको होला । तर अहँ † हाम्रो चित्त बुझेको छैन । मन कुँडिएको छ ।
१९९९ साल साउन १९ गते सोमबार बिहान ६:०० बजे महोत्तरीको औरही, नैनीगौरी, सखुवनीमा जन्मिएका चेतमानसिंह भण्डारी २७ हजार पाँच सय ५८ दिन बाँचेर २०७४ साल माघ १९ गते शुक्रबार १०:३० बजेदेखि सधैँका लागि सम्झनामा सीमित भए । १९ गते आए, १९ गते गए । माघ १९ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘कु’ भएको दिन । त्यही ‘कुसाइत’ मा नियतिले खोसेर लग्यो एउटा प्रिय गजलगो । चोखो, इमानदार र स्थापित कथाकार ।
चेतमानसिंह, मनु ब्राजाकी, श्यामबाबु, सगर नासत्य जे भने पनि उनी आफ्नै दुनियाँमा रमाउने मस्तमौला थिए । सम्भवत: उनको यही मनमौजीपनले उनलाई असमय गुमाउनुपर्‍यो । सँगै हुँदा उनी भन्थे, ‘साँच्चै भन्दा जीवनप्रति जति मोह राखे पनि जीवनका लागि जीवन केही होइन । मृत्यु नै जीवनको नियति भएकाले मृत्युपश्चात् जीवन महत्त्वहीन हुन्छ । मान्छे हुन सकेँ, यही मेरो उपलब्धि हो ।’
२०७४ साल मंसिर २३ गते शनिबार दिउँसो उनले अन्तिमपल्ट टन्न रक्सी खाए ।
त्यो दिन परिवारका सबै जना नातिनी आर्याको विवाहको तयारीसम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुन पुल्चोक गएका थिए । छोरा अमितले सँगै जान आग्रह गर्दा उनले ‘मैले आज एक जना भाइलाई भेट्ने समय दिएको छु, तिमीहरू जाओ म घरमै बस्छु,’ भने ।
मनुले भनेपछि भन्यो–भन्यो । कर गरेर मन फर्किनेवाला थिएन । अपहत्ते हुनु रहेछ ।
नभन्दै त्यो मान्छे आयो । एक–दुई घण्टा बस्यो । के–के कुरा गर्‍यो गयो । त्यसपछि फ्री भए ब्राजाकी ।
परिवारका सदस्यहरू फर्केर आउँदा दृश्य बदलिसकेको थियो । दुनियाँलाई थाहा छ, मनुलाई लोकल रक्सी निकै प्यारो थियो । नुन–खोर्सानीबाहेक सितन नभए पनि हुने । घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा थाहा हुन्थ्यो, आफूले ल्याएको एक बोतल रित्तिएर भाडामा बस्नेकहाँ काम गर्नेमार्फत मगाएको अर्को बोतल पनि आधा भइसकेको थियो ।
‘हाम्रो आँखा छलेर के अपहत्ते गरेको यो ?’ देख्नासाथ श्रीमती ज्ञानु जङ्गिइन्, ‘डाक्टरले नखानू भनेको मान्ने होइन । कति पीर पार्न सक्या †’
तर, जङ्गिएर के हुन्थ्यो † जे नहुनुपर्ने हो भइसक्या थियो ।
अर्थात् रक्सीका बारेमा उनी जहिले पनि ‘ओभर कन्फिडेन्ट’ रहे ।
मनुले रक्सी खान २०१७ सालमा सिकेका थिए । पोखरा सेती बगर किनारको झुप्रोमा बस्ने तान्त्रिक बाबाले भगवतीको ‘प्रसादी’ भन्दै चाख्न दिएका थिए रे सबभन्दा सुरुमा । त्यही सिलसिलाको चरम उत्कर्षमा अन्तिमपल्ट ‘प्रसादी’ खाएको राति उनी फेरि उठ्न नसक्ने गरी थलिए । यो तेस्रो पटकको स्ट्रोक (मस्तिष्क पक्षाघात) अनुभव थियो ।
आइतबार बिहान पाटन अस्पताल पुर्‍याउँदा उनी कोमामा पुगिसकेका थिए ।
सास छउन्जेल आस । अघिअघिको जस्तै यस पटक पनि स्ट्रोकलाई जित्छन् भन्ने थियो सबैलाई । जितिसकेका थिए पनि । भेट्न आउने शुभेच्छुकहरूसँग ह्विलचेयरमा बसेर फोटो खिच्ने भइसकेका थिए । कालो ऊनको टोपी लाएर ब्राजाकी मुसुक्क हाँसेको फोटो जीवन पानीले फेसबुकमा हाल्न भ्याइसकेका थिए । ब्राजाकी जीवित हुँदै उनको आत्मकथा ‘मनमौजी’ लेखेर समर्पण गर्ने एक प्रकाशकको योजनाबारे उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो । उनी अस्पतालबाट घर फर्किन्छन् भन्ने लागेको थियो ।
तर, नियतिलाई यो सब मञ्जुर भएन । अस्पताल भर्ना भएको तेह्रौं दिन जीवन पानीले फेसबुकमा राखेको तस्बिर नै ब्राजाकीको जीवनकालको अन्तिम तस्बिर भइदियो । मन्थलीबाट उनका नाममा ‘जगदीश घिमिरे स्मृति पुरस्कार’ आयो । उनले थाहा पाएनन् । माघको जाडो, अस्पतालका चिसा गाउन र निमोनियाका सामु झुके उनी । २० औँ दिन सिन्धुमा विन्दुसरह मिसिए केही नबोली ।
शीतल गिरीले भनेजस्तो कतिपय मानिस पिएको बेला सोच्दै नसोचेको कुरा गर्ने गर्छन् । तर मस्त पिएर आत्मीय मित्रसँग या बजारमा मनको मैलो पखाल्न भन्दै नजानिँदो आनन्दको नाममा ‘लुज टक’ गर्न कहिल्यै मन पराएनन् ब्राजाकीले । उनी भन्थे— तीन कुरा : जन्मन्छु, मर्छु र बिहे गर्छु भनेर आफूले सोचेको नहुँदो रहेछ ।
‘कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊँगा ।
मै तो दरिया हूँ समन्दर मे उतर जाऊँगा ।’
अहमद नदीम कासमीका यी शब्दका प्रभाव खुबै परेको थियो उनमा । यसका केही शेर अनुवाद गरेर र केही आफ्नातर्फबाट थपेर गजल बनाएका थिए उनले । जसलाई शक्ति बल्लभले स्वर दिएका छन् ।
‘कसले भन्छ काल आए मरिदिउँला ?
खोला हुँ म समुद्रमा झरिदिउँला !’
नेपाली गजलको पुन: जागरणमा ज्ञानुवाकर जत्तिकै योगदान मिसिएका मनु फिल्मी गजलकार हुन सजिलो छ, गालिब हुन गाह्रो छ भन्थे । बेलाबेलामा मृत्यु संवाद पनि चलाउँथे । आफैँ प्रश्न गर्थे आफैँ हस्ताक्षर ।
‘मनुलाई सोध तिमी मलाई नै केही थाहा छैन,
कस्तो हुन्छ आफूलाई फूलैफूलले छेकेपछि ।’
बीचमा बाँच्नुको निरर्थकता लहरै व्यक्त गरे उनले—
‘अझै बाँच्न अब मलाई मन लाग्या छैन ।
रमाइलो आज रन–वन लाग्या छैन ।
मरेपछि पनि सधैँ बाँच्नुपर्छ भन्छन्,
यसो गरी बाँच्न मलाई झन् लाग्या छैन ।’
खासमा ‘बाँच्न मलाई झन् लाग्या छैन,’ जस्ता शब्दहरू उनले काफिया मिलाउन मात्रै लेखेका थिए कि अन्तर्य अर्कै थियो भन्न गाह्रो छ । किनभने ती शब्दहरू लेख्दै गर्दा उनी सिर्जना उल्लासका दिनमा थिए । कालान्तरमा अनपेक्षित भइदेला भन्ने के थाहा !
‘मरेपछि सधैँका लागि मर्न मन छ,’ भनेर लेखे पनि यथार्थमा मर्न सक्तैनन्, मनु ब्राजाकी । जसरी मृत्यु–शय्यामा देवकोटाले ‘मुनामदन’ बाहेक मेरा सबै रचनाहरू डढाइदिनू भनेका थिए । तर, कसैले डढाएनन् बरु झन् जतन गरेर राखे उनका एक–एक शब्द ।
देवकोटाका छोरा कुमुद मनुका दरपिया पार्टनर थिए ।
‘तिमी पनि प्रतीक्षा गर कुमुद, जहाँ छौ । म पनि प्रतीक्षा गर्दै छु, जहाँ छु,’ कुमुदको असामयिक मृत्युमा चित्त दुखाउँदै मनुले औरहीबाट लेखेका थिए, ‘उर्दू कविहरूमा कुमुदलाई गालिब मन पथ्र्यो । मलाई लाग्छ, अब म कहिल्यै फेरि काठमाडौं गएँ भने एक्कासि कतै भेट हुनेछ र कुनै गल्लीतिर तानेर मस्तमौला र उन्मुक्त हाँसो हाँस्दै उसले गालिबको यो कवितांश सुनाउने छ—
यारों की कदूरतें है अब तो हम से ।
जिस रोज कि हम जायेंगे इस आलम से ।
उस रोज खुलेगी साफ सब पर ये बात,
इस बज्म की रौनक थी हमारे दम से ।’
हेर्दाहेर्दै प्रतीक्षाको घडी समाप्त भयो ।
एक दिनअघि सम्पादक विमल भौकाजीले ‘शारदा’ को ४६औँ अङ्कमा मनु ब्राजाकीको गजल प्रकाशित भएको जानकारी फेसबुकमा सार्वजनिक गरे ।
‘जिन्दगीको हुन्छ दुइटा पानो ।
एउटा भुइँ अर्कोचाहिँ छानो ।
अचेलका ऊँट हात्तीभन्दा,
‘मनु’ सधैँ हुँदो रै’छ सानो ।’
विडम्बना जीवनकालमा प्रकाशित यो अन्तिम रचना छापिएको थाहै नपाई हिँडिदिए ब्राजाकी ।
‘थी खबर गर्म की गालिबके उडेङ्गें पुर्जे, देखने मैं भी गया पै तमासा न हुआ ।’
गालिबले भनेजस्तो मनुको जिन्दगीको अन्तिम ‘तमासा’ पनि राम्रै भयो । फेसबुकभरि हल्ला जताततै थियो । तर, आर्यघाटका ‘कोही’ थिएन ।
‘मनु † तिमी र मैले जिन्दगीका धेरै वर्षहरू साथसाथै बितायौँ तर यो अन्तिम समयमा साथ दिन सकिएन । तिम्रो यो महाप्रस्थानमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली †’
शोक–पुस्तिकामा शैलेन्द्र साकारले लेखेपछि अरू हस्ताक्षरहरू मिसिँदै गए । ज्ञानुवाकर पौडेल, तुलसी दिवस, नयनराज पाण्डे, इस्माली, नारायण तिवारी, जीवेन्द्रदेव गिरी, मातृका पोखरेल, रवि प्राञ्जल, अभय श्रेष्ठ, मनोज न्यौपाने, रत्न कोजु, जीवन पानी, सुनील पुरी, बाबु त्रिपाठी, भेषराज घिमिरे, होम भट्टराई, क्षितिज समर्पण, महेश खड्का, लक्ष्मी श्रेष्ठ, जीतेन्द्र भण्डारी ।
जसले साहित्यका लागि आफ्नो घर भनेन, थर भनेन उसलाई सम्झेर आर्यघाट पुग्ने साहित्यिक नामहरू औँलामा गन्न सकिए ।
एक जना एफएम रिपोर्टर आर्यघाटमा अनुग्रहित थिए । एक–दुई जनाले फोनमै सोधेर काम चलाए । तर, मलामीका मोबाइलबाहेक कुनै डीएसएलआर क्यामेराका फ्ल्यास बलेनन्, मनु ब्राजाकीका शवतिर फर्किएर । भोलिपल्ट कुनै अखबारमा मनु ब्राजाकीको चिता जल्दै गरेको फोटो छापिएन । कुनै टेलिभिजनमा फुटेज अटाएन ।
‘यही दुुखान्त छ,’ गजलगो सुनील पुरी भन्छन्, ‘श्रद्धाञ्जलीका लागि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा केहीबेर विश्राम गर्ने समय र ठाउँ पाइएला भन्ने थियो । तर, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू टक्टकिए ।’
‘जुन ठाउँमा लास राख्ने हो, त्यो ठाउँमा मर्मत हुँदै छ,’ भन्ने ओठे जवाफ फर्काएगङ्गाप्रसाद उप्रेतीले । नाच्न, भतेर खान जति पनि ठाउँ हुने प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको चौरमा मनु ब्राजाकीका लागि ठाउँ नहुने ? यो मुलुकमा कुनै एउटा झन्डाको फेरो नसमात्ने लेखकको कुन हविगत हुन्छ देखाइदिए प्राज्ञहरूले ।
‘के गर्ने ? धेरै कवि–साहित्यकारले सनातनदेखि यस्तै नियति बेहोर्नुपरेको छ,’ ज्ञानुवाकर पौडेल चित्त बुझाउँछन्, ‘भूपी शेरचनका पालामा पाँच जना साहित्यकारहरू आर्यघाट आएका थिए । बालकृष्ण समका पालामा ११ जना । मधुपर्कका सम्पादक नारायणबहादुर सिंहका पालामा पनि सात–आठ जना मात्रै थिए । कम से कम मनु ब्राजाकीका पालामा डेढ दर्जन त कटे ।’
‘सबै बेफुर्सदी भएको नाटक गर्छन् । परेको बेलामा साथ दिँदैनन्,’ नारायण तिवारी भावुक हुँदै भन्छन्, ‘हेर्दै गर्नुहोला ब्राजाकीको कृतित्व र व्यक्तित्व लेख्नेहरू बग्रेल्ती भेटिनेछन् अब । धेरैलाई उनको नाम भजाउन, पारिश्रमिक थाप्न र घर खर्च चलाउन सजिलो हुनेछ ।’
तर आफूलाई लठुवा र दुनियाँलाई पाखण्डी उपनाम दिने मनुलाई जीवनभर कसैसँग स्थायी चित्त दुखाइ थिएन । मरेपछि त कुरै सकियो ।
‘आजसम्म जजसले मलाई मान–सम्मान दिए उहाँहरूलाई धन्यवाद †,’ यो देश, यो समाज, हामी साथीभाइ जसले श्यामबाबु वा चेतमान सिंहबाट मनु ब्राजाकी बनायो, त्यसप्रति मनमा कुनै सहानुभूति छैन ? भन्ने मेरो जिज्ञासामा उनले भनेका थिए, ‘त्यहाँभन्दा बढी म केही दिन सक्दिनँ । जे दिनु हो मैले आफ्नो लेखेर दिइसकेँ ।’
नेपालीमा एक्लो बृहस्पति झूटा भन्ने उखान छ ।
तर, परम्पराभन्दा विपरीत थिए मनु । भन्थे, ‘म एक्लो वृहस्पति होइन, एक्लो एकलव्य हुँ । बृहस्पतिको बेग्लै गुट थियो । मेरो कुनै गुट छैन । जगदीश मेरो प्रिय मित्र हो । तर बेलामा उसको पनि झोला बोक्न सकिएन ।’
सम्भवत: झोला नबोकेकै कारण एउटा ‘बेस्ट–सेलर’ लेखकको महाप्रस्थानका समय आफन्तसहित सय जना साक्षी पुर्‍याउन गाह्रो भयो ।
२०४६ मा पहिलो संस्करण छापिएको मनु ब्राजाकीको ‘तिम्री स्वास्नी र म’ कथासंग्रह २०७२ सालमा छैटौँ संस्करण बजारमा आयो । यो भनेको साझा प्रकाशनको इतिहासमा उल्लेख्य बिक्री हो । साङ्ग्रिला बुक्सले छापेको ‘अन्नपूर्णाको भोज’ पनि निकै बिकेको किताब हो ।
तर किताब जति बिके पनि, नाम जति चले पनि के गर्नु † हाजिर गर्ने बेलामा मलामी गयल भएपछि । बचेखुचेका आठ–दस जनाले आर्यघाटका इँटा पखाले, सकियो ।
तर यसरी गुमनाम बिदाइ हुनुअघि आत्मकथा लेख्न चाहन्थे ब्राजाकी ।
‘अहिले नेपाली साहित्य लेखनको बजारमा आत्मकथा ‘बेचिने माल’ भएको छ । त्यही ठानेर मैले आत्मकथा लेख्न थालेको होइन । यसभन्दा पूर्व नै जगदीश घिमिरेलगायत धेरै शुभचिन्तकहरूले मेरो अध्ययन र भ्रमणको विस्तृति थाहा पाएर आग्रह गरेका थिए । के लेखौँ ? भनेर चिन्तन/मनन गर्दागर्दै दुई दशक बितेर गए । लेखौँ कि नलेखौँले पनि पिरोल्यो,’ उनले भनेका थिए, ‘विश्व–साहित्यका आत्मकथाहरू र हाल नेपाली साहित्यअन्तर्गत लेखिरहिएका जस्ता आत्मकथा लेख्ने शैली र प्रकार आफूलाई प्रेरक नभएकाले ‘बिटेन ट्रयाक’ भन्दा फरक, पृष्ठपोषणभन्दा पृथक् शैली र संरचनाको अन्वेषण गर्दै लेखिरहेको छु— मेरो चेतनाको जीवनयात्रा † चिन्तनको गतिकी र भोगाइको वैयक्तिकताको निजत्वमा विश्वस्त हुने/नहुने पाठकको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । यसमा मेरो कुनै दाबी छैन ।’
तर नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको धाराबाहिक ‘कान्छी बेगम’ उपन्यासजस्तै जीवनकालमा आत्मकथा लेख्ने मनुको अन्तिम रहर पनि अधुरै रहयो ।
मध्यकालीन सामन्ती संस्कार र आधुनिकताले ल्याएका समस्त दुर्गुणहरू छेलोखेलो भएको समाजमा मनु आफ्नो जीवन जिउने शैली ‘एब्नर्मल’ (असामान्य) मान्थे । जिउने शैली मात्र होइन उनको विचार पनि उस्तै छक्कलाग्दो हुन्थ्यो ।
‘जीवनमा साहित्यकार बनेर ठूलो पछुतो लागेको छ,’ उनी भन्थे, ‘तर साहित्यकार नबनेको भए अझै ठूलो पछुतो लाग्ने थियो ।’
आमा शान्तिदेवी सिंह (९६) अझै हिँड्दै–डुल्दै छिन् ।
मनुलाई भने ७५ वर्ष कटाउन सकस भयो । यायावर कोठामा धेरै वर्ष खुम्चिए ।
‘कतिपय बेलामा ग्लानिजस्तो हुन्छ कि केही गर्न नसकेर बसीबसी भात मात्रै खाइरहेको छु भनेजस्तो,’ कुरैकुरामा एक दिन उनले मसँग भने, ‘हुन त पहिले पनि आफ्नो परिवारका लागि मैले केही पनि गर्न सक्या होइन । र, परिवारले भोग्नुपर्ने दु:ख–पीडा उनीहरूले चुपचाप भोगेका छन्, त्यही नै मेरा लागि ठूलो श्रद्धाञ्जली भा’को छ ।’
तुलसीहरि कोइरालाका अनुसार मनु ब्राजाकी मस्तराम स्रष्टा थिए एकलकाँटे स्वभावका, जिज्ञासु र तर्कशील व्यक्ति । बिर्सिनेका सम्झनाहरूमा बाँचिरहने ।
तर बुज्रुकहरूले उनको सम्मान गर्न जानेनन् । हुँदाहुँदा प्राज्ञहरूकै थलोबाट उनको २१ वटा कथाहरूको सञ्चयन ‘आमालाई बेच्नु हुँदैन लाटा †’ को पाण्डुलिपि बेपत्ता भयो । २०५४ फागुन ३ गते ३६ नम्बरमा दर्ता गरेको पाण्डुलिपि कहाँ छ ? प्राज्ञ साथी भाउपन्थीले पनि कुनै सूचना दिन सकेनन् ।
मनुको कथाकारिताबारे थेसिस लेख्ने क्रममा विमल अधिकारी पाण्डुलिपिसम्बन्धी जिज्ञासा बोकेर धेरैपल्ट प्रतिष्ठान धाए । तर, ढाकको तीन पात भयो । ‘२०६० सालसम्म थियो रे... खोजिरहेका छौँ,’ २०७० मा सदस्य–सचिव बनेका सनत रेग्मीले विमललाई यस्तै जवाफ दिए, ‘हराएको रहेछ भने क्षमा माग्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन ।’
पछिल्लो समय यसबारे कसैले सोध्यो कि जवाफ दिन झर्को मान्थे ब्राजाकी ।
‘होइन, यसरी एउटा कथासङ्ग्रहको पाण्डुलिपि बेपत्ता पार्दा पनि तपाईं चुपचाप हुनुहुन्छ, यसबारे कतै उजुरबाजुर नलाग्ने नै हो त ? पाण्डुलिपि बुझाएको प्रमाण पनि त होला नि ?’ नारायण तिवारीले सोधे ।
‘के गरूँ ? गाऊँ ? गाउन आउँदैन । नाचूँ ? आँगन टेढो छ,’ च्याँट्ठिँदै ब्राजाकीले प्रतिप्रश्न गरे ‘बलात्कारपछि सप्रमाण बलात्कारी भेटिए पनि के हुन्छ ?’
फेसबुकको चल्ती नहुँदाका दिनमा अहिलेका धेरै लेखक, कवि, साहित्यकार, पत्रकारका प्रिय पत्रमित्र थिए मनु । धर्के पानामा पूरा डिको नतानेका चिटिक्कका अक्षर उनको पहिचान थियो । उनको एउटा बानी के थियो भने उनी अन्तर्वार्ता लिन इच्छुक जिज्ञासुलाई प्रश्न पठाउन भन्थे र यत्नपूर्वक उत्तर लेखेर पठाउँथे ।
‘अरू सबै बेस छ । पोहोर अनावृष्टि थियो, यसपालि अनावृष्टि छ । जे छ, छँदै छ ।’
प्राय: पत्रको अन्तमा उनी यस्तै लेख्थे । र, संस्कृतको एउटा संयुक्त शब्द लेख्न बिर्सिंदैनथे । किमधिकम् । अर्थात् सबै कुरा तपाईंलाई थाहा छँदैछ, धेरै के भन्नु !
सारमा, मन ब्राजाकीका अन्तिम दिनमा पनि मनु दाइले भनेजस्तै भयो— किमधिकम् !
प्रकाशित : माघ २७, २०७४ ११:५८
« Reply #13 on: April 01, 2018, 03:46:39 AM »
अलबिदा क्रान्तिकारी मनमौजी मनु
गत फेब्रुअरीको पहिलो साता नेपाली साहित्यका महान कथाकार मनु ब्राजाकीको निधन भयो । निकै व्यस्त भए पनि उनका विषयमा केही गतिलो सामग्री प्रकाशित हुन्छ कि भन्दै अनलाइनहरू चहारेँ । तर, कतै खास केही फेला पार्न सकिनँ । उनका दर्जनौं जिग्रीहरू मौनधारणमै व्यस्त भए । सोचेँ, अलिअलि सरसङ्गत गरेको र पढेको आधारमा मैले पनि उनीबारे केही लेख्नुपर्छ ।
पहिलो पटक मनु ब्राजाकी भन्ने नाम सुनेर उनको फिदा बन्दा म किशोर थिएँ । उनको हस्ताक्षरसहितको पत्र पाउँदा चाहिँ २० वर्ष टेकेको थिएँ । उनको पत्र मात्रले पनि जिन्दगीमा के गर्यो गर्यो खै ? औपचारिक पढाइभन्दा उनको जस्तै मनमौजी काम गर्न प्रेरित गर्यो अनि आफ्नो मनमा लागेका काम मात्रै गरिरहने बाटो फराकिलो बनायो ।
पहिलो पल्ट यी स्रष्टाको अनौठो नाम सुन्दा मलाई लाग्थ्यो– पक्कै पनि यिनको सिङ या जुरो पलाएको हुनुपर्छ । उनले आफैं चेतमानसिंह भण्डारीबाट नाम बदलेर मनु ब्राजाकी (त्यागी मान्छे) बनाएका थिए । अलिकपछि, स्नातक तह पढ्दा चाहिँ उनीबारे अझ धेरै जानियो । उनका विषयमा केही हल्ला र केही अर्धसत्य कुरा हामीमाझ निकै चर्चा हुन्थे । एक दिन एउटा साथीले भन्यो– यिनी रक्सी नखाई लेख्नै सक्दैनन् । अर्कोले थप्यो– पहिला एक्लै ‘जनयुद्ध’ गर्न हतियार उठाएका क्रान्तिकारी मान्छे हुन् अरे । अर्कोले भन्यो– उर्दूमा सही गर्छन्, उर्दू राम्रो लेख्छन् यिनी । हामीमध्ये मसहित केहीलाई त उनका धेरै गजलका लाइन लाइन कण्ठ थिए ।
यस्ता अनेक कुरा सुनेपछि कुतूहल बढेर म थामिनसक्नु भएँ । अब मैले यिनलाई पनि चिठ्ठी लेख्ने योजना बनाएँ । त्यसबेला केही समकालीन र केही अग्रज मेरा साहित्यिक पत्रमित्र थिए । गोपी सापकोटा, प्रकट पङ्गेनी ‘शिव’, डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’, विवश पोखरेल, राजेश्वर रेग्मी आदिको सूचीमा अब यी सिङ्–जुरो पलाएका कथाकार÷ गजलगोलाई पनि थप्ने सोच बनाएँ । तर यिनलाई चिठ्ठी लेख्न चाहिँ अरूलाई जस्तो सामान्य पत्र लेखेर पठाउन सकिनँ, सोच्दै, लेख्दै फेरि सार्दै गरेँ । करिब एक साता केर्दै, मेट्दै गरेर बल्ल पत्र तयार गरेँ ।
०४६ को मधुपर्कको एउटा अङ्कमा यिनको कथाको पुछारमा ठेगाना थियो, त्यही सारेँ र लैनचौर हुलाकबाट चिठ्ठी खसाएँ, औरही, महोत्तरीको ठेगानामा । त्यसबेला सेलिब्रिटीसँग सम्पर्क राख्न अहिले फेसबुक र ट्विटरमा फलो वा एड गरेजस्तो सजिलो उपाय थिएन । हामी काठमाडौंमा रहने घरविहीनहरू ठेगानाविहीन पनि थियौं । हुलाक ठेगाना अहिलेजस्तै गोलमाल थियो । अर्को उपाय काठमाडौंमा पत्राचारका लागि पोस्ट बक्स नम्बर पाउन गाह्रो थियो । मैले चाहिँ एउटा ठूलो निजी कम्पनीमा काम गर्ने साथी रेशम श्रेष्ठको पोस्ट बक्स प्रयोग गर्ने गरेको थिएँ । एक महिनाको ब्यग्र प्रतीक्षापछि मनु ब्राजाकीको पत्र मेरो हात पर्यो । केही जिज्ञासाका जवाफ, केही शुभकामनाका शब्द र केही सान्त्वनासहित । अब म त्यो चिठ्ठी बोकेरै हिँड्न थालेँ । मनुको सन्दर्भ अउने बित्तिकै मैले त्यही चिठ्ठी देखाइदिन थालेँ । अहिले सम्झँदा मेरो मनोविज्ञानमा म आफूलाई मनुबारे आधिकारिक व्यक्ति ठान्दोरहेछु भन्ने लाग्छ । उनको एउटा कथा मार्यो च्याङवा मार्यो..... स्नातक तहको ऐच्छिक नेपालीको कोर्समा थियो । यसले गर्दा पनि उनलाई नचिन्ने साथीभाइ थिएनन् । तिनका माझ म उनलाई चिन्ने हुनु गौरवको विषय हुन्थ्यो । अहिले यी सबै सन्दर्भ सम्झँदा आफैसँग लाज लागेर आउँछ ।
मनु ब्राजाकी २०५० तिर काठमाडौं सरेर केही अखबारमा नियमित लेख्न थालें, दारुपानीको खर्चका लागि । जीवनको पछिल्लो समयमा जस्तै समकालीन साथीहरूबाट उनी उपेक्षित थिए । उनको सिर्जनाका अघि टिक्न नसक्नेहरू उनलाई जँड्याहा भन्थे र मनुलाई केवल जाँडको पर्याय ठान्थे । तर काठमाडौं आउनेबित्तिकै हामी युवा कवि, लेखकका लागि चाहिँ उनी प्यारा र सरल मनु दाइ भइसकेका थिए । हामी उनको कुरा सुन्न र उनको सङ्गत पाउन स–साना अफ्ठ्याराको वास्ता नगरी पछि लागिरहन्थ्यौं । त्यस समयसम्म हाम्रो पुस्ताले रक्सी खान थालेकै थिएन । तर म मनु दाइको सङ्गत गर्न भट्टीमा बसिदिन्थेँ अनि उनको सङ्गतका लागि पकेट खर्च घटाएर तानतुन पार्थें ।
०५१ सालको हिउँदमा उनीप्रतिको क्रेज बुझेर हामीले एउटा वनभोज आयोजना गर्यौं । उनलाई फकाएर बोलाउने अनि नजिक बन्ने लालसा हामी सबैको मनभित्र थियो । त्यस बेला प्रोल्लास सिन्धुलीय जनकपुरबाट काठमाडौं आएर मेरा साथी भइसकेका थिए । उनीसहित वनभोज आयोजना गर्न प्रमोद स्नेही, इन्द्रकुमार श्रेष्ठ ‘सरित’ र म सक्रिय भयौं । वनभोज कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि मनु दाइको सर्त रह्यो– मलाई पिउने कुरा पनि चाहिन्छ है । हामीले पिलाउने सोच बनायौं र उनका लागि थोरै व्यवस्था गर्यौं ।
त्यस कार्यक्रममा म र प्रोल्लासका लागि एउटा सानो तर अनौठो घटना भयो । उनी र म जोडिएको एउटा समूहले एउटा हवाइ पत्रिका निकाल्थ्यो । त्यहाँ मैले अत्यन्तै सानो सामग्री चाहिएको खाली ठाउँमा सात हरफजतिको आफ्नै लघुकथा छापेको थिएँ । आफ्नै पत्रिकामा आफ्नै रचना के छाप्नु भनेर एक मुस्लिम महिला हसिना खातुनको नाममा त्यो रचना छापिएको थियो । वनभोज कार्यक्रममा हवाइ पत्रिका हात परेपछि मनु दाइले भने, ‘म यो महिलालाई चिन्छु, यिनी क्रान्तिकारी महिला लेखक हुन् ।’
बूढाको कुरा सुनेर हामी छक्क पर्यौं । अहिले सम्झँदा लाग्छ, मनु दाइले नशाको सुरमा अरूसँग अलिअलि मिल्ने नाम यकिन नगरी यसो भनेका थिए होलान् । मुस्लिम समाजमा चल्तीको उपनाम भएका कारणले कुनै वास्तविक महिला लेखकसँग त्यो नाम जुधेको पनि हुनसक्छ भन्ने पनि लाग्छ । मैले त्यसपछि पनि केही वर्ष त्यो नामबाट केही रचना छापिरहेँ । तर, सम्पर्कले भ्याएसम्म भारतीय साहित्य पढ्दा अहिलेसम्म त्यो नामको महिला लेखक फेला परेको छैन ।
अँ त, उपत्यका छिरेपछि मनु दाइ कहिले भतिजा सरतसिंह भण्डारीका घरमा त कहिले नख्खु छेउछाउ गरी ललितपुरका गाउँतिर बस्न थाले । म यदाकदा दिनभरका लागि समय मिलाएर उनका कुरा सुन्न त्यता जान्थेँ । बूढाका कुरा सुनेर आनन्द आउने र जीवनको बाटो बनाउन पनि मद्दत मिल्ने भएका कारण सकेसम्म उनलाई पछ्याइन्थ्यो । यसै क्रममा मनु दाइ र अर्का बरिष्ठ गजलकार घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’ बीच मैले औपचारिक चिनजान गराएको थिएँ । २०५३ सालको कुनै हिउँदको महिनामा मैले काम गर्ने गरेको परिस्थिति साप्ताहिकको बागबजारस्थित कार्यालयमा उनीहरूबीच पहिलो भेट भएको थियो ।
त्यही साँझ हामी मनु दाइको भैंसेपाटीस्थित घर गएर रातभरी खानपिन गरेर बसेका थियौं । मैले यो समयमा अलिअलि पिउन थालिसकेको थिएँ, दुई साहित्यिक अभिभावक भेटेर त्यस रात निर्धक्क पिइयो । यसलगत्तै बागबजारमा एक दिन दिउँसैदेखि मनु दाइको असली फ्यान बनेर उनलाई साथ दिइयो । उनले ३० को दशकदेखि नै काठमाडौं आउँदा जाँदा बागबजारको जीवन र त्यहाँको समाज नियाल्ने गरेका रहेछन् । यस्तो अध्ययनका लागि उनी आफ्नो आदत बनेको रक्सी पिउने गर्थे भट्टीमा पसेर ।
भट्टीमै उनी जीवन र जगतसँग जोडिएको विषय बुझ्थे, सोधखोज गर्थे, दार्शनिक पाराले हेर्थे र कथा बुन्थे । अनुसन्धाताका हिसाबले गरेभन्दा फरक थियो मनु दाइले गरेको अध्ययन । तर, त्यसमा अनुसन्धान वा कथित रिसर्चभन्दा गहिरो मानवीय संवेदना गाँसिएको थियो । बागबजारका भट्टीसँग गाँसिएको त्यहाँका सयौं मान्छेका जीवन, उनीहरूको मूल्य, मान्यता र बाध्यता उनका अनेकौं कथामा आञ्चलिकताको सुगन्धसहित आएका छन् । उनका हरेक जसो गजलमा भट्टी घुमीफिरी आएकै छन् । यी सन्दर्भ उनी यदाकदा सुनाउने पनि गर्थे । त्यस साँझ उनीसँग मैले यस्तै विषयमा धेरै चासो राखिरहेँ, राति १२ बजेसम्म बूढा खुलिरहे ।
भट्टीवालीले मध्य राततिर यतै सुत्ने कि जाने भनेपछि हामी उठेर हिँड्नुपर्ने भयो । म बागबजारमै रहने साथी थानेश्वर सापकोटाको कोठा गएर सुतेँ । मनु दाइ पाटनतिर दिदीको घर जान्छु भन्दै छुट्टिए । उनलाई दिदीको घरमा पनि भिनाजुका कारण बेलाबेला अफ्ठ्यारो पथ्र्यो । त्यस्तो समयमा चाहिँ हाम्रा साथी सुनिल पुरी थिए, परेमा मनुको नाममा जे पनि सहयोग गर्ने । अर्को भेटमा त्यो रात बढी मातेर उनले पाएको हण्डर पनि सुनियो, दाइकै मुखबाट ।
कुनै जमानामा हजुरबाको खल्तीको पैसा चोरेर भारतका धेरै सहर भ्रमण गर्ने मनु लेखनको चार दशकदेखि नेपाली साहित्यका महान् कथाकार र गजलकार थिए । सम्पन्न किसान परिवारमा हुर्किएका उनी आफ्ना बाबु र बाजेले धार्मिक किताब पढ्ने गरेकै कारण अध्ययन र साहित्यमा हामफाल्न सजिलो भएको पृष्ठभूमि सम्झिने गर्थे । उनी भन्थे, ‘म सामन्ति किसानको नालायक छोरो हुँ ।’
उनले लामो समयसम्म आफ्नो पुख्र्यौली घर महोत्तरीको औरही बसेरै काठमाडौंलाई लेखनमा चुनौती दिए । त्यति बेला लाग्ने मोफसलवाद र काठमाडौंवादको विषय उनका बारे उठेन । राजधानी पस्नुअघि लेखन र व्यवहारकै कारण काठमाडौंका नयाँ लेखकमाझ उनी मिथकजस्ता थिए । ५० को दशकमा राजधानीवासी भएपछि उनीबारे धेरैका भ्रम हटे । बरु, केही कुरामा उनी अनौठा नै रहेछन् भन्ने स्थापित भयो ।
सयौं कथा र गजलका सर्जक ब्राजाकीको तिम्री स्वास्नी र म बहुचर्चित् कथासङ्ग्रह हो । यस पङ्क्तिकारका एक जना अनुयायी लेखक भाइसाथी अनिल थापा अहिले पनि यो कथा कण्ठस्थ सुनाउँछन्, सन्दर्भ निस्कँदा । यसबाट पनि उनले पछिल्लो पुस्तामा कति प्रभाव छाडेका रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
जीवनको अन्तिमतिर उनी केही वर्ष मुलुकबाहिर अमेरिकाको कोलोराडो बसे, सन्तानका साथ । करिब डेढ दशकअघि नेपालमा एकपल्ट र फेरि अमेरिकामा अर्कोपल्ट स्ट्रोक भएपछि बिर्सने समस्याले सताइएका थिए उनी । तैपनि जीवनको अन्तिम किताब भन्दै संस्मरण लेखिरहेको बताएका थिए, २०७० सालको मध्यतिर । पत्रकार नरेश ज्ञवाली र यो पङ्क्तिकारसँग उनले त्यस दिन किताबको नाम सुनाएका थिए– बिर्सनेका सम्झनाहरू । पछि न त यो किताबको नाम फेरिएको कतै सुनिएन, न त किताब नै निस्कियो ।
लामो कुरा लेख्न समस्या हुने भएकाले पछिल्लो समयमा चाहिँ उनी गजल लेखेरै आफ्नो उफान पोखिरहेका थिए । त्यस बेला चाहिँ उनले भनेर अरूलाई लेख्न लगाउने रहेछन् । भन्थे, ‘अहिले सम्झन समस्या छ र लामो कुरा लेख्न पनि गाह्रो हुन्छ । यो समयमा मैले २, ४ वटा मात्रै कथा लेख्न सकेँ । अहिले लेख्न मन लाग्छ तर शब्द नै सम्झन गाह्रो हुन्छ । मनमा आएका कुरा छोटोमा लेख्न पाइने हुनाले यो अवधिमा पनि गजल चाहिँ धेरै लेखेको छु ।’
जीवनमा कहिल्यै नोकरी नखाएका र कामको दुःख नगरेका मनु रक्सी र अमेरिका बसाइबारे भन्थे, ‘मैले लेख्ने र लेख्नुपूर्व चिन्तन गर्नका लागि रक्सी खाने गरेको धेरै समय भएको थियो । परिवारले यस विषयमा चिन्ता गर्ने क्रममा अमेरिका बस्ने मेरी छोरी र यहाँ बस्ने उसकी आमाले स्काइपमा कुरा गर्दागर्दा मलाई उतै बस्न मन्जुर गराए ।’
विदेश बस्नेबित्तिकै राष्ट्रबिरोधी हुने नयाँ सामाजिक सञ्जालको आरोप, बहसमा आउने अनेकौं खालका राष्ट्रवादका परिभाषा र विवादसँगै मनुजस्तो महान कथाकारलाई लगातार अमेरिका बस्नु सामाजिक हिसाबले पनि गाह्रो थियो । अर्को कोणबाट हेर्दा विकसित मुलुकमा दिउँसो आफ्नो घर र छरछिमेकमा मात्र नभएर निकै टाढाटाढासम्म पनि घरमा केही हुँदैन । उनले यस विषयमा भनेका थिए, ‘यहाँजस्तो गफ गरेर समय विताउने अवस्था हुँदैन । समाचारबाहेक टिभी हेर्न मन नलाग्ने भएकाले लाइब्रेरी गएर समय बिताउथेँ ।’ त्यस समयको उनको अनुभूति थियो, ‘भविष्यमा गर्ने केही नरहेपछि अतीतले हामीलाई बाँच्ने ऊर्जा दिँदोरहेछ ।’
पञ्चायतको चरम उत्कर्षको समयमा कथा र गजलको ‘डन’ बन्नुका अनेकौं अर्थ थिए । बाल्यकालदेखि नै विद्रोही स्वभाव, अत्यन्त उन्नत चेतना अनि समाजको चेतनास्तर चाहिँ अत्यन्तै तल । अनि यही समयमा बाहुनक्षत्री परिवारको पहिलो पुस्ताका जँड्याहा भएर परिवारको नजरमा बेरोजगार हुनु कम्ती अफ्ठ्यारो विषय थिएन । यो अवस्थाले उनलाई अझ बढी सिर्जनशील र अराजक बन्ने प्रेरणा दियो । चेतना र विद्रोहको सङ्गम मनुले २०५२ सालमा माओवादी नामको समूहले सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’ जस्तै विद्रोह जगदिश घिमिरेसँग मिलेर दुई दशकअघि नै परिकल्पना गरेका थिए ।
घिमिरेले यो सन्दर्भ उनको चर्चित किताब अन्तर्मनको यात्रामा पनि उल्ल्ख गरेका छन् । मनुले सुनाएथे, ‘सनकमा हामी युद्ध गर्न बन्दुक उठाउने भन्दै जनकपुरबाट सिन्धुली पुग्यौं । चन्द्रमान लामा र हामी दुई गरेर समूहमा तीन जना थियौं । उनीहरू माक्र्सवाद अध्ययन गरेर आफूभित्रको अराजकता साम्य पार्न हिँडेका थिए । हाम्रो कम्युनिस्ट समाज पनि खुलेको थियो । जगदिश भिमानबाटै बिरामी भएर फर्कियो, चन्द्रमान र म चाहिँ सिन्धुलीगढीसम्म पुग्दा जनयुद्ध सेलायो ।’
लेखकले मौलिकता विकास गर्नका लागि उसमा जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिल्यै हुनुपर्छ भन्ने चेतना उनले हाम्रो पुस्तालाई सिकाए । यसको परिणाम मेरो पुस्ताका मनुका फ्यानमध्ये राजनीतिक चेतनालाई नै घृणा गर्ने कवि, लेखकहरू राजनीति बुझ्ने प्रयासमा लागे । अहिले तिनै भन्छन्, ‘हरेक कविले राजनीति बुझ्नु अनिवार्य छ, गर्नु, नगर्नु आफ्नो कुरा ।’ अहिलेको पुस्ताले सुरुमै सिकेका कतिपय लेखनसँग सम्बन्धित विषय मनुले कतै नबोली लेखेरै स्थापित गराएथे ।
अहिले हरेकजसो लेखकले बुझेको ‘मौलिकता भन्नु नै शब्दलाई आफ्नो ढङ्गले प्रयोग गर्नु हो र शैली नौलो नभई पाठकलाई आकर्षित गर्न सकिँदैन’ भन्ने विषयका उनी प्रष्ट देखिने उदाहरण थिए । साहित्यसँग जोडिएका र जेलिएका कुरालाई सुगठित ढङ्गले लेखनमा राखेर निजत्व बनाउने काममा उनी यस्तरी लागे कि तराईको पीडा र आञ्चलिकतालाई शैलीको मौलिकतासहित त्यहाँको समाज साहित्यमा स्थापित गराए । उनको कथामा बाध्यताको यौन, अभाव, शोषण र पाखण्डको पटाक्षेपको मिश्रण पाइन्छन् । तैपनि उनी नेपाली साहित्यको समग्र स्तरसँग सन्तुष्ट थिएनन् । नयाँ पुस्ताका लेखकसँग माफी माग्दै उनी भन्थे, ‘अहिलेको साहित्य लेखन गम्भीरताभन्दा बढी प्रचारात्मक छ । व्यावसायिकता बढेको कुरा एक हिसाबले राम्रो भए पनि यसले हलुका वस्तुलाई धेरै ल्याउँछ । गम्भीर लेखनमा लागेका मान्छेलाई यसले फरक नपरे पनि पाठकलाई चाहिँ कुन असल साहित्य र कुन कमसल भन्ने भ्रम पर्छ ।’
मनु जति यौन नेपाली साहित्यमा कसले लेख्यो होला र ? तर, उनको यौन प्रचारको र बजारी यौन थिएन । यौन र नारीलाई हाम्रो समाजले हेर्ने विषयका विडम्बना र पीडा छन् उनका कथामा । उनी व्यावसायिकताका लागि तिलस्मी, यौन र जासुसी विषय धेरै लेखिने बताउँदै यस्ता सामग्रीले आलोचनात्मक चेत भुत्ते बनाउने र केवल पढुन्जेल मनोरञ्जन मात्र दिने विषयमा सबैभन्दा सचेत थिए । वास्तवमा मनुले भनेजस्तै त्यसरी हेर्दा अहिलेका चर्चाका आएका धेरै सामग्री साहित्य नै हो कि हैन भन्ने प्रश्नचिह्न लगाउनु पर्छ । अझ पछिल्लो समयमा अखबारको प्रभाव र सङ्ख्या बढेसँगै समाजमा सामाजिक सञ्जालले पनि सञ्चारमाध्यमकै हाराहारीको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् ।
वनारस लाइब्रेरीका स्टाफले शरदचन्द्र चट्टोपाध्यायको चरित्रहीन भन्ने ठूलो किताब दिँदा उनी त्यसबेला, ‘हाम्रो नेपालीमा यस्ता किताब किन नभएका होलान्’ भन्ने सोच्थे । त्यसै बेलादेखि लेख्ने प्रयास गर्न थालेका मनु ८ कक्षा पढ्दा एकपल्ट मुम्बई पुगेछन् । त्यसबेला अर्काकै भनाइमा आधारित लेख लेखेर टाइम्स् अफ इन्डियाको कार्यालयमा लगेर दिएपछि उनका रचना छापिन थाले । जीवनमै छापिएको त्यो पहिलो रचना उनले धेरै दिनसम्म दिनमा ६, ७ पटक पढ्ने गरेको सुनाउँथे ।
हरेक साहित्यप्रेमी र साहित्यका विषयमा लेख्ने व्यक्तिले गफ दिने एउटा विषय हो– नेपाली साहित्यको स्तरबारे आँकलन । धेरै ठाउँ र दशकौंदेखि भनिने गरेको छ, नेपाली साहित्य अनुवाद मात्र हुने हो भने विश्व साहित्यको स्तरमा छ । यो कसले नाप्ने र त्यसका आधार के छन् भन्ने चाहिँ कसैले अहिलेसम्म भनेका छैनन् । यस विषयमा ब्राजाकीले मसँग भनेका थिए, ‘आधुनिक अङ्ग्रेजी साहित्य धेरै फरक छ । मलाई कथाबारे केही थाहा भएको आधारमा भन्दा उनीहरूको लेखन धेरै परिपक्व छ । तर त्यहाँ अहिले लेखिन थालेका धेरै कुरा हामीले पनि पहिल्यै प्रयोग गरिसकेका हुने रहेछौं । मैले धेरै अघि अन्नपूर्णाको भोज भन्ने कथा मेरा साथीहरू किशोर नेपाल र सन्तोष भट्टराईलाई पात्र बनाएर लेखेको थिएँ । पश्चिममा सन् २०१२ मा मात्र अर्नेस्ट हेमिङ्वेलाई पात्र बनाएर लेखिएको नयाँ शैलीको कथा भन्दै छापिएको थियो । विदेशी भाषामा हाम्रा कृति अनुवाद भएको भए हामी पनि धेरै कुरामा अगाडि हुनेरहेछौं नि । तर त्यो अनुवादमा सरकार र मन्त्रीको सिफारिस चाहिँ हुनुहुँदैन ।’
जीवनभर नास्तिक रहेका मनु अलिक निष्क्रिय र रक्सीविहीन भएको समयमा चाहिँ कति नास्तिक बने त ? पङ्क्तिकारलाई निकै जिज्ञासाको विषय थियो यो । २०७० को त्यस झरिलो साँझमा उनले आफू जति उमेर बढ्यो, त्यति नै धेरै नास्तिक बनेको बताए । भने, ‘रक्सी खान छाडेपछि नास्तिकता अझ बढेको छ ममा । ईश्वर भनेको वकबास हो जस्तो लाग्छ अहिले पनि ।’
उनको यो भनाइले करिब दुई दशकअघि एक रात मनुले मसँग गाएको पुरानो हिन्दी गीतको स्मरण गरायो । नशा लाग्दै गएपछि उनले त्यस रात यस्तो गीत गाएका थिए
भगवान दो घडी जरा इन्सान बन के देख
धर्ती में चार दिन कभी मेहमान बन के देख ।
माफी चाहन्छु मनु दाइ, म मिडियामा काम गर्ने लेखक भएर पनि तत्कालीन रोयल नेपाल एकेडमीका मान्छेले पचाइदिएको तिम्रो कथा सङ्ग्रह आमालाई बेच्नु हुँदैन लाटा का विषयमा खोज्न सकिनँ । अलबिदा र क्रान्तिकारी सलाम मनु दाइ, तिम्रै बाटोको नक्कल गर्दै म पनि यतिसम्म कोर्न सक्ने भएँ ।
-तस्बिर– नरेश ज्ञवाली